के हो युरिक एसिड ? युरिक एसिड भएकाहरुले के कस्ता खानेकुरा खाने ? कसरी बच्ने यस्ता छन जानकारी मुलक टिप्स - E ALL NEPAL
के हो युरिक एसिड ? युरिक एसिड भएकाहरुले के कस्ता खानेकुरा खाने ? कसरी बच्ने यस्ता छन जानकारी मुलक टिप्स
शरीरभित्र पिउरिन भन्ने प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड उत्पादन हुन्छ ।
सामान्यतः ३ देखि ७ मिलिग्राम/डेसिलिटरसम्मको युरिक एसिड नर्मल मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, त्यसलाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ ।
यसरी युरिक एसिड बढेपछि सामान्यतः खुट्टाको बुढीऔँलाको छेउमा अचानक दुख्ने तथा सुन्निने समस्या हुन्छ ।
राति सुत्ने वेलामा सामान्य अवस्थामा रहेको मानिसको पनि बिहान उठ्दा नाटकीय रूपमा दुख्ने र सुन्निने भई खुट्टा टेक्न गाह्रो हुन्छ ।
जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ ।
युरिक एसिडका बिरामीले खानामा विशेष ख्याल पु¥याउनुपर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री :
बजारमा उपलब्ध पेयपदार्थको पनि प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ ।
त्यस्ता पेयपदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ । जसबाट फ्रुक्टोज नमक तत्व पनि हुन्छ । जसले युरिक एसिड बढाउन सहयोग गर्छ ।
युरिक एसिडका बिरामीले दुग्धजन्य पदार्थको भने प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
अमिलो कागती, भेनेगर, ग्रिन टी, कफीको पनि प्रयोग गर्दा कुनै फरक पर्दैन । किनभने, यस्ता पदार्थले युरिक एसिड घटाउन सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
काउली, ब्रोकाउली, कुरिलो र पालुंगोमा पनि युरिक एसिडको मात्रा बढी हुन्छ ।
तर, यस्ता तरकारी प्रयोग नै नगर्नेचाहिँ होइन । मात्रा मिलाएर हरियो तरकारी खाँदा हानि पुर्याउँदैन ।
दीर्घकालीन गाउट: यो कडा खालको जोर्नी दुख्ने समस्या हो। लामो समयसम्म युरिक एसिडको समस्या हुनेहरु दीर्घकालीन गाउटका बिरामी हुन्। यस्तो अवस्थाका बिरामीलाई औषधि खाँदा केही समय निको हुने र पछि फेरि बल्झिने र जोर्नीहरुमा अत्याधिक दुखाइ हुने गर्छ। प्रायःजसो ६ महिना वा वर्ष दिनभन्दा बढी युरिक एसिडको समस्या भएकाहरुलाई गाउटको दीर्घरोगीका रुपमा लिन सकिन्छ। यस्तो समस्या भएकाहरुमा दुखेको जोर्नी माथिबाट ‘टोफाइ’ भन्ने सानो कमलो मासुको डल्लो जस्तो देखा पर्छ। यस्तो समस्या भएकालाई खुट्टाको बुढी औँला र आसपासमा मात्र होइन शरीरका अन्य जोर्नीमा पनि दुखेको महसुस हुन्छ।
एक्युट: तुरुन्तै खुट्टाका जोर्नीहरु रातो भएर सुन्निनु वा अचानक दुख्नु एक्युटको लक्षण हो। छुँदा पनि दुख्ने र हिँड्न असहज हुने यस्तो समस्या भएकाहरुले औषधि खाँदा वा खानपिनमा नियन्त्रण गर्दा सन्चो हुन्छ। यो समस्या मध्यपान र धूमपान गर्नेलाई बढी देखिन्छ।
सामान्यतया जोर्नी दुख्दैमा गाउट भएको भन्न मिल्दैन। जोर्नी दुख्ने विभिन्न कारण हुन्छन्। गाउट भए/नभएको जान्नका लागि जोर्नी दुखेको वा सुन्निएको ठाँउबाट पानी झिकेर जाँच गराउनुपर्छ। जाँच गराउँदा जोर्नीहरुमा सुइको टुप्पो जस्तो आकार भएका साना-साना ‘क्रिस्टल’हरु देखा परेपछि गाउट भएको थाहा पाउन सकिन्छ।
युरिक एसिड पहिलो पटक खुट्टाको बुढी औँला र त्यसको आसपासको जोर्नीहरुबाट दुख्न सुरु हुन्छ। यसलाई ‘मेटाटार्सल जोइन्ट’ भनिन्छ। प्रायः राति सुतेको बेला जोर्नीहरु अत्याधिक दुख्ने गर्छ र बिहान उठ्दा सुन्निएको हुन्छ। सुरुसुरुमा खुट्टाको बुढी औँलामा मात्र हुने दुखाइ समयमा उपचार नहुँदा अन्य ठूला जोर्नीहरुमा पनि सर्न थाल्छ। युरिक एसिड भएको थाहा नपाएकाहरुलाई रातो मासुको अधिक प्रयोग र मध्यपान सेवन गर्दा एक्कासी बुढी औँलाको जोर्नी सुन्निने र दुख्ने समस्या आउँछ। युरिक एसिडको समस्या महिनावारी नरोकिएका महिलालाई भने निकै कम मात्रामा देखिन्छ। महिनावारी हुँदा निस्कने हर्मोनले जोर्नी दुख्ने समस्यालाई कम गराउँछ।
खाना पूरै बार्नेभन्दा सन्तुलित भोजन जरुरी
युरिक एसिड बढेमा वा गाउटको समयमै उपचार नभएमा मिर्गौलामा असर पार्न सक्छ। यसले मिर्गौला फेल बनाउन सक्छ र मिर्गौलामा पत्थरी हुनसक्छ। गाउटले जोर्नीहरुमा ‘डिफर्मेसन’ (जस्तैः खुट्टाको बुढी औँला र जोर्नीहरुको आकार वा स्वरुप बिग्रनु) ल्यादिन्छ। युरिक एसिडले विस्तारै मुटुमा पनि असर पुर्‍याउँछ। यस्तै, शरीरका विभिन्न अंगमा जटिल समस्या ल्याइदिन सक्छ।
१. नियमित व्यायम गर्ने।
२. पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने। तर, मुटुका बिरामीले भने पानीको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार पिउनुपर्छ।
३. धूमपान र मध्यपानबाट टाढै बस्ने।
४. प्युरिन तत्व बढी हुने रातो मासु, गेडागुडी, गालेको अचार, फुलगोभी, च्याउ, पालुङ्गोको सेवन कम गर्ने।
५. गुलियो पदार्थ वा यस्ता अन्य पेय पदार्थको प्रयोग कम गर्ने।
६. शरीरको वजन घटाउने।
७. नियमित ‍औषधिको प्रयोग गर्ने।
८. समय-समयमा चिकित्सकको परामर्श लिने।
(बाथरोग विशेषज्ञ डा. रेग्मी ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलमा कार्यरत छन्)
प्रस्तुतिः पारसविक्रम शाही /swasthyakhabar
किसोरा अवस्थामा आफ्नो यौनाङ्गलाई स्वस्थ्य राख्न स्त्री पुरुषले जान्नै पर्ने टिप्स
यस्तो अनौठो पहाड, जहाँ हरेक महिना अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेर ‘यौन महोत्सव’ मनाइन्छ